Qaban qaabo lagu soo dhaweynayo Ra’isul Wasaare Khayre oo Garoowe ka socota | Somali National Television - sntv.so
Home PUNTILAND Qaban qaabo lagu soo dhaweynayo Ra’isul Wasaare Khayre oo Garoowe ka socota
Qaban qaabo lagu soo dhaweynayo Ra’isul Wasaare Khayre oo Garoowe ka socota
Garowe(SNTV) Xasan Cali kheyre Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya iyo wafdi ballaaran oo uu hoggaaminayo ayaa lagu wadaa in uu booqasho ku tagay Magalada Garoowe ee Xarunta dowlada goboleedka Puntland.
Qaban qaabo ku aadan soo dhaweynta wafdiga raiiusl Wasaare Khayre ayaa ka socota magaaladaasi,iyadoo madaxda Puntland iyo qeybaha bulshada ay isku diyaarinayaan sidii ay soo dhaweyn diiran ay ugu sameyn lahaayeen wafdigaasi,sida uu soo sheegayo Wariyaha warbaahinta Qaranka MAxamed Muuse Tarsan oo jooga Garoowe.
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya ayaa inta uu joogo Puntland waxaa uu booqan doonaa Magaalooyin ka mid ah puntland,isaga oo ka hirgelin doono mashaariic horumarineyd.
Sidoo kale waxaa uu ka qeybgalidoonaa sanadguuradii 20-aad ee aas aaskii Puntland,taasi oo ku began 1-da bisha soo socta ee August 2018,isagoona intaasi kadib la kulmi doona madaxda Puntland iyo qeybaha bulshada.
Qeybo kamid ah magaalada Garoowe,boorarka waxaa ku xardhan sawirada raiiusl wasaare Xasan Cali Khayre oo lagu qoray hal ku dhigyo ay kamid yihiin soo dhawow mudane raiiusl wasaare,iyadoo shacabka Puntland ay dareen xoogan oo dhanka soo dhaweynta ah ay muujinayaan.
Previous articleRaiisul wasaare kuxigeenka Dalka oo la kulmay wafdigii ka qeyb-galay shirkii waxbarashada
Next articleMadaxweynaha Farmaajo oo booqasho rasmi ah ugu ambabaxay dalka Eriteriya